युवाहरुको एउटा सत्प्रयास, १ अर्बको लगानीमा क्वालिटी पेपर उद्योग – Pahilo Page
२९ श्रावण २०७७, बिहीबार १३:२० 636 पटक हेरिएको
चितवन । चितवनको छिमेकी जिल्ला नवलपुरको आरुङ्गखोलामा १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा नयाँ कागज उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कागज उद्योगको इतिहास जोडिएको नवलपरासी जिल्ला हाल नवलपुर र पश्चिम नवलपरासीको रुपमा रहेको छन् ।
भृकृटी कागज उद्योग हाल वन्द रहेपनि तत्कालीन अवस्थामा कागजको जिल्लाको रुपमा परिचित थियो । नवलपरासीको पहिचान फेरि स्थापित गर्न युवा व्यवसायीहरुको लागानीमा क्वालिटी पेपर इण्डष्ट्र«ीज प्रा.लि. सञ्चालन आएको हो । उद्योगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वदेशमा खेर गएको कागजजन्य फोहर र स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उत्पादन गर्न नयाँ क्वालिटी पेपर इण्डष्ट्र«ीज प्रालि सञ्चालन ल्याएको जनाएको छ ।
नवलपुरस्थित आरुङ्गखोलामा वि.स. २०७५ सालदेखि स्थापना भई भरतपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेर झण्डै दुई बर्षको मिहिनेतपछि आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन लागेको हो । मुख्यरुपमा प्याकेजिङ्ग (कार्टुन) बनाउने कागज उत्पादन पहिलो चरणमा सुरु गर्न लागेको उद्योगका अध्यक्ष सुकेशकुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि नेपालमा प्याकेजिङका लागि भारत र चीनसहित तेस्रो मुुलुकबाट आयात गर्ने अवस्था थियो । निकट भविष्यमा सेतो कागज पनि यहीं उत्पादन गर्ने र मुलुकको कुल खपतको आधा हिस्सा ओगट्ने लक्ष्य राखेका उनको भनाई छ ।
‘नेपाली पहिचान दिने र यहाँको उत्पादनलाई प्रयोग गर्दै आत्मनिर्भर र स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगमा जोड दिँदै हामीले नयाँ कागज उद्योग सञ्चालन ल्याएका हौँ’, उद्योगका अध्यक्ष सुकेशकुमार गुप्ताले भन्नुभयो, ‘लामो समयमा विभिन्न व्यापार व्यवसायमा अनुभव बटुलेका युवा व्यवसायीहरुले स्वदेशी कच्चा पदार्थमै नयाँ प्रयोग गर्दै क्वालिटी पेपर इण्डष्ट्र«ीज प्रालि जन्मायौं ।’
कागजजन्य फोहरलाई पुनः प्रशोधन गरी स्वदेशमा दुई प्रकारका कागज उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित यो उद्योग सञ्चालन ल्याएको प्रबन्ध निर्देशक राजन पियाले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले युरोपियन प्रबिधिको प्रयोग गरी वातावरण प्रदूषणलाई रोक्न यो कागज उद्योग स्थापना भएको दावी गर्नुभयो । यस उद्योग करिब ११ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
नेपालमा हाल ८० प्रतिशत सेतो कागज तथा ६० प्रतिशत प्याकेजिङ कागज विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको तथ्याकं छ । ‘नेपालमा खेर जाने कागजजन्य फोहर हाल सस्तो मूल्यमा विदेश निर्यात हँुदै थियो उहाँले भन्नुभयो, अबदेखि स्वदेशमा नै यसको पुनः प्रयोगमा ल्याउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य पनि हो ।’
स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जन गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन ४ जना युवाहरु र प्रभु बैंक लिमिटेडको सहकार्यमा १ सय करोड रुपैयाँ लगानीमा उद्योग सुरु हुन लागेको हो । उद्योगले स्थानीय १ सय ५० जनालाई रोजगारी दिने बताएको छ । नेपालमा हाल ३ वटा कागज उद्योग रहेका छन् । वीरगञ्ज र विराटनगरको उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि भैरहवाको उद्योग बन्द छ ।
उद्योगले नेपाली बजारबाट निस्कने दैनिक १ सय १५ टन कागजजन्य फोहर संकलन गरी प्रशोधन गरी १ सय २० टन उत्पादन गर्नेछ । यसअघि यस्तो फोहर धेरै मात्रामा भारत र चीनमा निर्यात हुँदै आएको थियो । उद्योगले तेश्रो मुलुकबाट आउने कागजको गुणस्तर र मूल्यमा आफ्ना उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने उद्योगका बजार निर्देशक रुपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यस्तै देशमा धेरै पत्रपत्रिकाहरु समेत रहेका छन्, जसका लागि विदेशबाट कागज आयात गरी प्रकाशन हुने गरेकोमा यस्तो कागजसमेत यहाँ नै उत्पादन सुरु गर्ने उद्योगको तयारी छ ।